Home » Travel Deals » L'Auberge Del Mar dia manolotra fihenam-bidy 50% amin'ny taha tsara indrindra + Fanapahana tampoka fanovana
Fonosana iray "Izahay mianakavy" dia natolotr'i L'Auberge Del Mar ny fijanonana ny alahady hatramin'ny alakamisy hatramin'ny 30 aprily 2021.
Ny GM an'ny L'Auberge Del Mar dia te hanome toerana ho an'ireo vahiny hamelombelona ny vatan'izy ireo.
Ny toeram-pialan-tsasatra amin'izao fotoana izao dia sary an-tsaina indray miaraka amina fanovana an-tapitrisany dolara izay hampiorina ny trano fandraisam-bahiny amin'ny haavo mihaja sy be pitsiny.
L'Auberge Del Mar dia eo afovoan'ny tanàna amoron-tsiraka atsimon'i California Del Mar ary manolotra traikefa amin'ny Resort izay mampatsiahy ny fananana amoron-dranomasina tsy miankina.
"Ny antenainay amin'ity tolotra ity dia ny hanomezana mpitsoa-ponenana fandosirana ilaina amin'ny famoizam-po sy ny fifandraisana," hoy i Robert Gregson, tale jeneralin'ny L'Auberge Del Mar. "Tsy misy toerana tsara hanaovana izany, miaraka amina toerana amoron-tsiraka akaiky ny resort. rendrarendra sy fialan-tsasatry ny ekipanay ho an'ny fenitra ambony indrindra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana. ”
L'Auberge Del Mar, notondroin'ny vahiny tamim-pitiavana hoe “manonofy any an-trano", Manolotra traikefa amin'ny fitsangatsanganana mampatsiahy ny fananana amoron-dranomasina tsy miankina, miaraka amin'ny fahitana mahatalanjona mitazana ny Oseana Pasifika. Ny toeram-pialan-tsasatra amin'izao fotoana izao dia maminavina indray ilay fananana miaraka amina fanovana an-tapitrisany dolara izay hampiova ny trano fandraisam-bahiny amin'ny haavo sy haitraitra vaovao, hahatonga ny fonosana "We are Family" ho fotoana mety indrindra amin'ny tampon-tampon'ilay avia.
Ny lisitra feno momba ny fiarovana ny toeram-pialofana dia hita eto: Mijanona ho azo antoka, manomboka miaina.
Momba an'i L'Auberge Del Mar
Any afovoan'ny tanàna amoron-tsiraka any atsimon'i California Del Mar, L'Auberge Del Mar, tantanan'ny Noble House Hotels & Resorts, dia mitazana ny Ranomasimbe Pasifika manome traikefa momba ny fananana amoron-dranomasina tsy miankina. Ity hotely akaiky ity dia misy efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fandraisam-bahiny 121 nohavaozina, safidy fisakafoanana mamelombelona, ​​spaoro an-tokotany amoron-tsiraka feno spaoro 5,000 metatra toradroa, lalana manokana ahazoana amoron-dranomasina mora, kianja tenisy, ivon-toerana 24 ora milamina ary toeram-pilaminana faritry ny pisinina misy fialamboly sy tadio. Ny karazan-tsakafo sy fisotro misy karazany dia misy ny morontsiraka ho an'ny fahitana any an-dranomasina al fresco, ny efitrano fandraisam-bahinin'i L'Auberge Del Mar ho an'ny cocktails vita amin'ny asa-tanana sy ireo sakafo matsiro sy matsiro ary ny Bleu Bar akaikin'ny dobo filomanosana ho an'ny libations and nibbles. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady www.laubergedelmar.com.
Momba ny hotely sy trano fandraisam-bahiny Noble House
Niorina tamin'ny filôzôfia izay manasongadina ny toerana, fanavahana ary ny fanahy, Noble House Hotels & Resorts dia manokan-tena amin'ny famoronana sy fitantanana fananana miavaka izay mankalaza ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ny foiben-toerany any Seattle, Washington ary mitombo tsy mitsaha-mitombo, ny portfolio Noble House dia misy portfolio-trano lafo sy avo lenta miisa 18 fananana hotely miavaka sy mahasarika maso, trano fisakafoanana, fisotroana ary efitrano fatoriana 50, ny Napa Valley Wine Train, ary fanangonana spaotra, marinina, sy trano tsy miankina manerana an'i Etazonia sy Kanada. Toeram-pialan-tsasatra amoron-dranomasina manerana an'i California sy Florida, fialan-tsasatra lafo vidy ao Jackson Hole, WY, British Columbia, ary Colorado, ary trano fandraisam-bahiny an-tanàn-dehibe any Seattle sy San Francisco no manamarika ny fanangonana maro karazana. Miorina amin'ny toerana itodiana mendrika ny lisitry ny siny tsirairay avy ary nilahatra tamina fampitaovana tsy manam-paharoa izay manentana ny traikefa nahafinaritra, ny fanangonana hotely, trano fandraisam-bahiny ary fitsangatsanganana tsy hay hadinoina, dia fantatra amin'ny famoronana traikefa tsy hay hadinoina. Raha mila fanazavana fanampiny, fitsidihana www.nobleHouseHotels.com na antsoy ny hotely Noble House & Resorts amin'ny 877.NOBLE.TRIP.
Momba an'i Pebblebrook
Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) dia fananam-bola amidy ampahibemaso ("REIT") ary tompona hotely fandraisam-bahiny an-tanàn-dehibe sy fialantsasatra any Etazonia. Manana trano fandraisam-bahiny 54 ny Orinasa, mitotaly 13,400 eo ho eo ny efitrano fandraisam-bahiny manerana ny tsena an-tanàn-dehibe sy fialan-tsasatra 15 mifantoka amin'ny tanàna vavahady amoron-tsiraka andrefana. Raha mila fanazavana fanampiny, fitsidihana www.aleonotels.com ary araho izahay ao @PebblebrookPEB.
Hawaiian Airlines dia manitatra fandaharana mialoha ny mazava any Japon, Korea atsimo